Konke odinga ukukwazi ngeProforma Invoice | Ezezimali Zomnotho
Konke odinga ukukwazi nge-Invoice yeProforma
USusana Maria Urbano Mateos | | Osomabhizinisi, izinkampani
Ngabe uthenge imoto noma insizakalo ezohlinzekwa ngokuzayo? Uma kunjalo, lapho-ke bazokunikeza, kungaba ku-inthanethi noma ngeposi, i-invoyisi ye-proforma. Kungumqulu osetshenziswa emabhizinisini amaningi nokuthi asikacaci okwamanje ukuthi yenzelwe ini noma isetshenziselwani.
Uma uzisebenza, nikela ngezinsizakalo ku-inthanethi, noma uma uthenga imikhiqizo noma izinsizakalo, kufanele wazi ukuthi i-invoyisi ye-proforma injani, injani, isetshenziswa nini, yini ehlukanisa ne-invoyisi ejwayelekile, nokuthi kusho ukuthini ngoba ngubani okhipha nokuthi ubani othola eyodwa. i-invoyisi ye-proforma.
Lo mbhalo omncane uzokutshela konke odinga ukukwazi ngabo, ngakho-ke, ekugcineni, uzokwazi konke esikutshele khona, nezinye izinto ezibaluleke ngokulinganayo.
1 Yini i-invoyisi ye-proforma?
2 Yini i-invoyisi ye-proforma?
3 Yini equkethe i-invoyisi ye-proforma
4 Yini ukusebenza kwe-invoyisi ye-proforma?
5 Ungayisebenzisa nini i-invoyisi ye-proforma?
6 Ezinye izibonelo lapho ama-invoice we-proforma azokusiza khona
Yini i-invoyisi ye-proforma?
Una I-invoyisi kaProforma uhlobo lokusalungiswa kwe-invoyisi ejwayelekile neyamanje, kepha ngaphandle kokuba nenani lebhuku.
Ikhonza i- thembisa ukulethwa komkhiqizo noma kwensizakalo esikhathini esizayo kumakhasimende, ezobe ikhishwa i-invoyisi ejwayelekile enemininingwane efanayo namanani aqukethwe ku-invoyisi ye-proforma.
Kuyisibopho esivela kumthengisi kumthengi ukuthi bazonikeza umkhiqizo noma insizakalo ngentengo ethile.
Isibonelo: umuntu waseJarandilla de la Vera ufuna imoto online, iSUV, isibonelo, iNissan Juke.
Akatholi lutho enyakatho yeCáceres, futhi uthola eyodwa, ngentengo enhle kakhulu, e-Alcalá de Henares, eMadrid, kodwa akakwazi ukuya khona manjalo, noma umthengisi engakakulungeli imoto ukuletha.
Ukuqinisekisa ukuthi ikhasimende lizoba nemoto yalo ngentengo eliyitholile, umthengisi noma umthengisi uyalithumela Invoice kaProforma yokuqinisekisa inani nentengo yemoto.
Ngamafuphi: ukuzibophezela kwezohwebo.
Abaningi bavame ukwenza iphutha nge-invoyisi ye-proforma nge-invoyisi, kepha lokhu akunjalo.
Ngaphambi kokuthi uchaze kangcono kangcono ukuthi yenzelwe ini, kufanele ukwazi lokho i-invoyisi ye-proforma ineqiniso elifanayo lokubalwa kwemali njenge, isibonelo, i-quote, noma isithembiso sokuthengisa, okungukuthi, alikho inani lezinjongo zokubalwa kwemali, ngakho-ke akukho ukukhishwa kwanoma iyiphi i-invoyisi ye-proforma okufanele kumenyezelwe.
Ikhonza ngaphezu kwanoma yini ukuze bobabili umthengisi njengomthengi azivikele uma kwenzeka intengo ishintsha, noma ukuqinisekisa inani lokuthengiselana, futhi ayisetshenziswanga kuphela ekuthengeni okuncane kepha nasekusebenzeni kwezentengiselwano kwamazwe omhlaba kwemikhiqizo nemali enkulu, ukuze kubhalwe inani lemisebenzi, noma njengemodeli yokuthengiswa okuthengiswayo.
Kumthengi umele ukuphepha, njengasesibonelweni esedlule, iNissan Juke yakhe ezoba nayo ngentengo okuvunyelwene ngayo, noma ngabe kudlule amasonto, futhi kuleso sikhathi inani lenyukile ... noma lehlile. Lokho okungameleli kumthengi, kuyisiqinisekiso uma kwenzeka imoto iba nephutha ... ngalokho i-invoyisi ejwayelekile, noma inkontileka iyasetshenziswa.
Kumele ucace ngomehluko, futhi noma ngabe ungumthengisi noma ungumthengi, ungalokothi udideke izibopho nakho konke okushiwo i-invoyisi ye-proforma kulokho engakwenzi, ngaphandle kokukuphambanisa ne-invoyisi.
Yini equkethe i-invoyisi ye-proforma
Isizathu esiyinhloko sokuthi kungani abantu bavame ukwenza iphutha nge-invoyisi ye-proforma nge-invoyisi ejwayelekile, ukuthi ziqukethe idatha efanayo.
Empeleni umehluko kuphela ukuthi i-invoyisi ye-proforma kufanele iqukathe ngokusobala nangokusobala isihloko esithi "UMSEBENZI”Esihlokweni sedokhumende, futhi okungenzeka kungabalwa noma kungafakwa izinombolo noma kusongwe njengama-invoyisi.
Imininingwane okumele i-invoyisi ye-proforma kufanele ibe nayo yile elandelayo:
Isihloko kufanele sibe nesihloko esithi "invoyisi ye-proforma", icace futhi ibonakale kakhulu
Usuku lokukhishwa kwe-invoyisi ye-proforma
Igama lokuhweba noma igama lenkampani
Inombolo ye-VAT yomphakathi
Igama eligcwele noma igama lenkampani
I-NIF, i-DNI noma i-NIE
Incazelo ecacile nenemininingwane yokuthengiswayo noma izinsizakalo, kucacisa ubuningi noma amayunithi womkhiqizo
Intengo yeyunithi, inani eliphelele kanye / noma imali lapho kwenziwa khona lo msebenzi (rá)
Izindleko zomshuwalense, ezokuthutha, izengezo, njll.
Inani lamaphakeji, isisindo esikhulu, inetha nevolumu
Indlela yokukhokha nemibandela
Idethi yokusebenza kwemibhalo
Okwenziwe emhlabeni jikelele, okuyilapho kusetshenziswa khona kakhulu:
Inombolo kamazisi yentela (uma kwenzeka ukusebenza komphakathi)
Futhi akudingekile ukuthi iqukathe isiginesha noma isitembu senkampani, ngaphandle uma iklayenti licela ukuthi i-invoice ye-proforma igxivizwe.
Yini ukusebenza kwe-invoyisi ye-proforma?
Kunenkinga maqondana nokusebenza kwe-invoyisi ye-proforma.
Vele ngoba ukusebenza kwayo, njengoba sikutshele, akudluli ngaphezu kokuba ne- imvelo efundisayo noma njengesiphakamiso sokuthengisa, njengesilinganiso sokuthengisa noma isithembiso esithunyelwe kumakhasimende noma ekuthengeni.
Akusebenzi njengobufakazi bokukhokha, noma ukufuna noma yini ehlobene ne-invoyisi noma njengedokhumende yokubalwa kwezimali.
Kusetshenziselwani lapho? Kusebenza njengesethembiso sokuhlonipha intengo yemikhiqizo noma izinsizakalo ngesikhathi sokusebenza esiqukethwe ku-invoyisi ye-proforma.
Ayinakho okunye ukuqinisekiswa kwanoma yiluphi uhlobo, futhi isetshenziswa kaningi ekuthengisweni kwamazwe omhlaba, ngaphakathi nangaphandle kwe-European Union, yize ligama ledokhumenti kuphela eliguqukayo.
Ungayisebenzisa nini i-invoyisi ye-proforma?
Yize ukusetshenziswa okuyinhloko yilokho kwe- uthembisa ukuletha umkhiqizo noma isevisi, akuyona kuphela eye, ngenxa yezinjongo ezisebenzayo, engekho emthethweni.
Cabanga ukuthi awunasiqiniseko ngemininingwane yeklayenti, isibonelo, ulahlekile i-ID yomuntu, nekheli lakhe lezimali futhi awukwazi ukuxhumana neklayenti, kepha kufanele uthumele iklayenti idokhumenti, noma ngabe likucelile i-invoyisi .
Njengoba inakho, ngezinhloso ezisebenzayo, akukho ukuqinisekiswa, ungayisebenzisa njengohlaka.
Ithumela iklayenti lakho, noma wena njengeklayenti uyayithola, ngedatha 'yamanga' noma eyisibonelo, futhi uma bobabili bevumelana, iklayenti lithumela idatha yabo efanele, lamukela amanani nezilinganiso nezindleko ezihlobene nalo, manje-ke, yebo, ungenza i-invoyisi ejwayelekile yokugcina.
Lokho wukuthi, ngaphezu kokusebenza njenge- isithembiso sokulethwa, kuwuhlaka ukuze 'ungasebenzisi' ama-invoyisi ajwayelekile, into, njengoba wazi kahle, ongeke uyikhiphe kanjalo ngoba yebo.
Uma ungasebenzisi ama-invoice we-proforma, kufanele ubanikeze lokhu kusetshenziswa. Uma uyiklayenti, ungacela eyodwa yokonga isikhathi uma kwenzeka ufuna ukucabanga kangcono ngokuthengwa okungenzeka noma ngokuthola izinkontileka zezinsizakalo noma imikhiqizo.
Futhi umphakeli noma inkampani, ingakwazi sebenzisa i-invoyisi ye-proforma ukonga isikhathi uma kungenzeka uphelelwe ama-invoyisi ajwayelekile. Ungakuthumelela i-invoyisi ye-proforma ukuze iklayenti lithembise ukulethwa kwe-invoyisi yokugcina ngokushesha lapho selinalo mbhalo, ukuze kuthi uma seliphinda futhi, lingathinteki ekushintsheni okungenzeka kwentengo yemikhiqizo noma amasevisi athengiwe.
Ezinye izibonelo lapho ama-invoice we-proforma azokusiza khona
Yize sike sakhuluma nje ngokusetshenziswa okuthile kwe-invoyisi ye-proforma, ikusebenzela kakhulu izinto eziningi kunendlela ocabanga ngayo.
Sikunikeza izibonelo lapho ama-invoice we-proforma azosiza kakhulu:
Imvamisa ama-invoice e-proforma asetshenziswa ngamasiko, ngaphakathi nangaphandle kwe-European Union ukukhombisa ukubaluleka kwempahla okufanele ithuthwe.
2.- Imixhaso nezibonelelo
Izibonelelo ezithile, njengalezo ezinikezwa ozimele abasha, zidinga ukutshalwa kwezimali ezithile ebhizinisini, futhi ungethula i-invoyisi ye-proforma ukuzithethelela.
3. - Ekusebenzeni kwezezimali
Lapho othile enza isicelo semalimboleko, kungaba yinkampani noma umuntu, umuntu noma inkampani kudingeka ukuthi yenze imali ethile, futhi ukuyivuma njengesiqinisekiso noma isiqinisekiso, kwethulwa ama-invoice e-proforma ahambisanayo.
4.- Njengohlelo lwesigaba
Amanye amabhizinisi asebenzisa lo mbhalo ukuze 'ahlukanise' imikhiqizo ethile. Isibonelo, uma ikhasimende lingenayo imali eyanele noma umphakeli engenayo iyunithi, lingasebenza njengohlelo olubekelwe eceleni, ukuze kuvikelwe ukuguquguquka komkhiqizo.
5.- Isithembiso sokuthengiswa
Ekugcineni, sishilo ngalo, kepha kungenye ukusetshenziswa: ukunikezwa kokuthengisa. Ungathumela ukunikezwa kokuthengisa ngesimo se-invoyisi ye-proforma, ngentengo enesaphulelo kunaleyo oyinikeza abanye, futhi ngale ndlela, uziphoqelela ukuthi uhloniphe inani elingaphakathi kwethemu elinikezwayo.
I-invoyisi ye-proforma iyisiqinisekiso sokuthi le ntengo izosebenza esikhathini esinqunyiwe futhi ingenakho ukusebenza kwe-accounting. noma yini, kuyisithembiso kuphela, kepha ungasisebenzisa njengokusalungiswa futhi njengokunye ukusetshenziswa okuningi, noma ekusebenzisaneni kwamanye amazwe, ikakhulukazi kumasiko, ngaphakathi nangaphandle kwe-European Union.
Indlela ephelele ye-athikili: Ezezimali Zomnotho » Ibhizinisi » izinkampani » Konke odinga ukukwazi nge-Invoice yeProforma
USergio Lozano kusho
Ngiyanihalalisela ngesihloko esithakazelisa kangaka. Okukodwa kokumbalwa okuphelele kangangokuba ngithole kuma-invoice e-proforma. Ukuphela kwento engangikwazi ukukugwema ukufunda ukuthi ubeka inombolo ye-VAT yomphakathi njengolwazi oluyimpoqo kwi-invoyisi ye-proforma, kepha lokhu kwenzelwa kuphela labo opharetha abangaphansi kwe-ROI noma iRegistry ye-Intra-Community Operators, irejista lapho kutholakala kuphela labo opharetha bamanye amazwe. Isibonelo, esibonelweni esidalulwe ekuqaleni ngemoto, njengoba kungukusebenza kukazwelonke, ayidingi inombolo ye-VAT yomphakathi. Kulokhu, umuntu kufanele asebenzise imodi 036 futhi ayikhombise ebhokisini le-129.
Ekugcineni, bengifuna ukungeza ukuthi i-invoice ye-profroma isetshenziswa ngabangenisa izicelo ukucela ilayisense yokungenisa, njengobufakazi bokuthi lokhu kuthengiselana kwamazwe omhlaba kuzokwenziwa.
Phendula uSergio Lozano
Bheka, i-invoyisi ye-proforma esayinwa ngumthengi, ingabe ikhokhiswa intela yesitembu?
Imali exhunywe kunaniselwano, ingabe iyazuzisa?
Yini okufanele uyenze ngokulahleka emakethe yamasheya?